တခါတုန်းက တက္ကသိုလ်မှာ… မောင်လပြည့် (တက္ကသိုလ် ဆယ်ရက်) PART II | PoemsCorner
ဘ၀ တက္ကသိုလ် ကို ရွေးချယ်ခြင်း
ဒီလို နှင့် ၁၀ တန်း အောင်လို့မိမိနှစ်သက် ရာ တက္ကသိုလ် များကို ရွေးချယ်ရသည့်အချိန်သို့ ရောက်လာပါသည်။
တက္ကသိုလ် တတ်လျှင် သန်လျင် (တာဝ) ကိုသာ တတ်ရမည်ဟု သိလိုက်ရသဖြင့် ငယ်စဉ်က စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ မိသည်များ သဲထဲ ရေသွန် ဖြစ်ကုန် ၏ ။
အင်းလျားကန်ကြီး ရဲ့ ဘေး ။ ခုံတန်းပြာလေး တွေ ။ ဘူးသီးကြော်ဆိုင်လေးများ ။ သစ်ပုတ်ပင် ကြီး အောက် ။ ဂျပ်ဆင် ထိပ် က လရိပ်ပြာ ။ တည်ကြည်လေးနက်သော ဘွဲ့ နှင်းသဘင် ခန်းမကြီး ။
ဒါတွေ အားလုံးနှင့် . မပတ်သက် စေရ ။
ဒီတော့ ကျွန်တော်လည်း စဉ်းစားလိုက်သည် . ဆယ်တန်းစာမေးပွဲ အောင်သည်နှင့်တပြိုင်နက် အလုပ်တစ်ခု ၀င်လုပ်မည်။ စာပေးစာယူနှင့် ဘွဲ့ ကလေးတစ်ခု ရအောင်ယူလိုက်မည်။
ဘွဲ့ ရလျှင် နိုင်ငံခြားသို့ ထွက်ကာ အလုပ်လုပ်တော့မည်။
အဆိုပါ အတွေးမျိုးသည် ဆယ်တန်းအောင်သော မြန်မာ လူငယ် အများစု ၏ အတွေးအခေါ် ပင် ဖြစ်သည်။ ထို့ ကြောင့် . ဆိုကြမယ် ပျော်ကြမယ် အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ လူရွှင်တော် ကို မေတ္တာ ပြောခဲ့သည့် . ဆယ်တန်းအောင်လျှင် ကျောင်းပြီး ပြီပေ့ါနော်.. ဟူသော စကားလေးသည် ကျွန်တော်တို့ အတွက် ပင်ဖြစ်ချေလေပြီ။
ဒီတော့ ထိုခေတ်က လူငယ်အများစု ရွေးချယ်သည့် အဝေးသင်တက္ကသိုလ်ကိုသာ ရွေးချယ်မိတော့သည်။ ဘွဲ့ ရတာချင်းအတူတူ ပါပဲကွာ ။ အပြင်မျာ ကျူရှင်တတ်ပြီး စာမေးပွဲ ကို ၀င်ဖြေ . ပြီးတော့ အလုပ် တဘက်လည်း လုပ်လို့ ရတာပေါ့ ဟူသော စကားသံများလည်း ကြားမိပါသည်။
ထို့ ကြောင့် ကျွန်တော်သည် စာပေးစာယူ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား တစ်ဦးဖြစ်လာပါတော့သည်။ ခေတ်ကာလ၏ တောင်းဆိုမှူ့ အရ အင်္ဂလိပ်စာ လွန်စွာမှ အသုံးဝင် သဖြင့် ကျွန်တော်သည် အဆိုပါ အင်္ဂလိပ်စာ ကို ပင် အဓိက အနေနှင့် ယူ လိုက်မိပါသည်။
ကျွန်တော့်အိမ်သည် ဗိုလ်တထောင်မြို့ နယ်တွင်ရှိသဖြင့် ကျွန်တော်ကျောင်းတတ်ရသည်က သန်လျင် ဆီသို့ ။
နေ့ စဉ် တစ်နာရီ ခန့် ကားစီးကာ သန်လျင် ရှိ တာဝ အရပ် တွင် ဖွင့်ထားသော အရှေ့ ပိုင်းတက္ကသိုလ် ကိုသာ တတ်ရမည် ဟု သိရှိရပါသည်။
ခဲလေသမျှ သဲရေကျ ရလေပြီ ။
သို့ သော် ကျွန်တော့် စိတ်ထဲ ။ အတွေး အာရုံထဲတွင် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်ကြီးကတော့ လွမ်းမိုး လျက်ပင် ။
ယခု တတ်ရမည် ဆိုသော တက္ကသိုလ်ကိုလဲ စိတ်မှန်း နှင့် တွေးကြည့်မိသည်။ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ကိုမမှီ ရင်တောင် အနည်းဆုံးတော့ သူ့ မှာလည်း သူ့ အလှ နှင့် သူ ပဲပေါ့ ဟု တွေးမိ၏ ။
ပထမ ဦးဆုံး တက္ကသိုလ်နေ့ ရက်
မှတ်မှတ်ရရ ထိုနေ့ က လျှောက်လွှာတင်သောနေ့ ။ လူအပြည့် ပိတ်ကြပ်နေသော အဲယားကွန်း ကားကြီးကို စိတ်ငြီးငွေ့ အောင် စီးကာ သွား ခဲ့ရသည်။
သန်လျင်တံတားကြီးကျော်သောအခါ တက္ကသိုလ် ကို ရောက်ပြီဟု ထင်သော်လည်း.. သန်လျင်မြို့ ကိုပင် ကျော်သွား သေးသည်။
ကျိုက်ခေါက် ဘုရား ကြီး ကို ဖူးပြီး ဗယ် ဘက်သို့ ကွေ့ လိုက်သောအခါ မြင်ကွင်းများက ရုတ်ခြည်း ပြောင်းလဲ သွားသလိုပင် ။
ယနေ့ ထန်းရည် ရပြီ . ဟူသော ဆိုင်းပုဒ် လေး ။ ဘတ်စ် ကားရှေ့ မှ ဖြတ်လျှောက်သွားသော ကျွဲ ကြီး တစ်ကောင် ။ စိမ်းစိုနေသော လယ်ကွင်းပြင်များ ၊ ဘေးဝဲယာရှိ လူများ၏ လူနေမှူ့ စရိုက် . ၀တ်စားဆင်ယင်မှူ့ အပြင်အဆင်။
ငါ တော့ ဘယ်ရွာမှာ သွားပြီး စာသင်ရ မှာလဲ ။ ငါ က တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား မှ ဟုတ်ရဲ့ လား ။ ဒီလောက် တောခေါင်ခေါင် လယ်ကွင်းကြီးထဲမှာတော့ . တက္ကသိုလ်ကျောင်းကြီး မရှိနိုင်ပါဘူး ။
ဘတ်စကား စပယ်ယာ ကတော့ ဆင်းရမဲ့မှတ်တိုင် ကျော်သွားပြီထင်တယ်။ ဒါလည်း မဟုတ်သေးပါဘူး ။ ဘေးနားမှာလည်း ငါ့လို ပဲ ကျောင်းသား ပုံစံလေးတွေ နဲ့ ပါ။
စိတ်ထဲမှာတော့ မတင်မကျ တွေးရင်း လိုက်ပါခဲ့ရသည်။
ရောက်ပါပြီ ။ ရန်ကုန် အရှေ့ ပိုင်း တက္ကသိုလ် ။
လယ်ကွင်း ပြင်ကြီးထဲတွင် ထီးထီးမားမားကြီး ။
နေသည် ကျဲကျဲတောက်ပူသည်။ အရိပ်ဟူ ၍ မတွေ့ မိ ။ ကျွန်တော်သည် ရုတ်တရက် တက္ကသိုလ်ကျောင်းကြီးကို ကြည့်ပြီး အံ့သြမင်သက်မိသည်။
ဘယ်မှာလဲ သစ်ပုတ်ပင် ။ ဘယ်မှာလဲ အင်းလျားကန် ။ ဘယ်မှာလဲ ကံကော်တောက ဥသြဌက် လေးတွေ ။
ကဲပါ ရောက်မှတော့ မထူးပါဘူး ။ လျှောက်လွှာတင်ဖို့ အတွက် ကျောင်းတော်ကြီးထဲကို အရိပ်မဲ့ စွာ ဖြတ်သန်းခဲ့ရသည်။
လတာပြင် ကြီးထဲတွင် အဆောက်အအုံကြီး လေး လုံး ဆောက်ထားပြီး တက္ကသိုလ် ဟူ၍ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသလို ခံစား ရပါသည်။
ထားလိုက်ပါ လေ ။
အောက်စဖို့ ဒ် တက္ကသိုလ် ဆိုတာတောင် တချိန်တုန်းက တဲပုတ် သာသာ လေး ကနေ ကမ္ဘာကျော် တက္ကသိုလ်ကြီး ဖြစ်သွား သေးတာ။
ဟောဒီ တာဝ တက္ကသိုလ်ကြီးလည်း နောင်တချိန် မှာတော့ ….
အဝေးသင် တစ်ဦး၏ စာသင်ချိန် ဆယ်ရက်
ဒီလို နဲ့စာမေးပွဲ ဖြေဖို့ အတွက်ဖွင့်ပေးတဲ့.အနီးကပ် ၁၀ ရက် ဆိုတဲ့ အတန်း တွေဖွင့်လာပါတယ်။
ဒီတော့ မှ တက္ကသိုလ် ရဲ့ စာသင်ခန်းမှာ စာသင်ဖူးတာပါ။ ကျောင်းသားတွေ ကလည်း အများကြီးပေ့ါ။ ကျောင်းသူလေးတွေကလည်း သူ့ ထက်ငါ အပြိုင်အဆိုင် အလှချင်းပြိုင်လို့ လေ။ အော်.. ငါ့ရဲ့ ကျောင်းသားဘ၀ ဆိုတာ တစ်နှစ်လုံးမှာ မှ ဆယ်ရက်တည်းပေါ့ နော်။
ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ ။ ကိုယ်ရွေးတဲ့ လမ်း ကိုယ်လျှောက်ရမှာပေါ့ ဗျာ။
အနီးကပ် ဆယ်ရက် သင်တန်းကို လာတတ်ကြတဲ့ သူတွေ ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ တစ်ခု တည်းပါ။ စာမေးပွဲဝင်ခွင့် ကျောင်းသားကဒ်ပြား ရရှိရေးပါပဲ ။ ဒီတော့ သင်တန်း ဆရာတွေ ကလည်း ကျောင်းသား ကဒ်ကို ချက်ချင်းမပေးပဲ .. အနည်းဆုံး သုံးရက်လောက်ကြာမှ ပဲ ပေးပါတော့တယ်။
ကျွန်တော်တို့ တွေကလည်း ကဒ်ပြား ကိုယ့်လက်ထဲ ရောက်ပြီ ဆိုတာနဲ့ . တာဝ တက္ကသိုလ် ကြီးကို နှူတ်ဆက်ကျောခိုင်းပြီးတော့ တကယ့်ကို အနီးကပ် သင်ပေးတဲ့ ကျူရှင် ဆီကိုပဲ ပြေးကြပါတယ်။ ပန်းဆိုးတန်း တ၀ိုက်က ကျူရှင်တွေကတော့ ကျွန်တော်တို့ လို အဝေးသင် စာပေးစာယူ ကျောင်းသားတွေအတွက် တကယ့် အစစ်အမှန်တက္ကသိုလ် ကြီးပါပဲ ။ ကျူရှင် ဆရာတွေရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် ကျွန်တော် ဟာ သင်ခန်းစာတွေကိုတော့ သင်ကြားခွင့်ရလာပါပြီ။ တာဝ ကျောင်းရဲ့ အနီးကပ် ကိုသာ စောင့်မျော်နေရရင်တော့ ရှိတ်စပီးယား SHAKESPERAER ကိုတောင် စာလုံးပေါင်းမှန်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ပထမနှစ် အင်္ဂလိပ်စာ စာမေးပွဲ
ဘယ်လို ရည်ရွယ်ချက် လဲတော့ မသိ။ ကြားလိုက်ရသည့် သတင်းက မယုံချင်စရာ ။
ကျွန်တော်တို့ အင်္ဂလိပ်စာ ကျောင်းသားများကို စာမေးပွဲဖြေဖို့ တက္ကသိုလ် ၀င်းကြီးထဲမှာ နေရာမရှိဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ . သန်လျင်မြို့ နယ် ထဲက အထက်တန်းကျောင်း တစ်ခု မှာ ဖြေဖို့ စီစဉ်လိုက်ကြပါတယ်။
ကျွန်တော် ထင်ထားတာကတော့ စာမေးပွဲကိုလာရောက်ကြီးကြပ်မဲ့သူတွေကတော့ တက္ကသိုလ် အင်္ဂလိပ်စာ ဌာန က ဆရာ၊ မ တွေပဲ လာရောက်စစ်ဆေးမယ်လို့ ထင်ထားတာ ။ တကယ်တမ်းကျတော့ အဆိုပါ အထက်တန်းကျောင်းက ဆရာမ တွေကပဲ စာမေးပွဲ အခန်းကိုစောင့် ရမယ်တဲ့လေ ။ အော်…. ငါတို့ ကိုတော့ အရာရာ ယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့အထက်တန်းကျောင်းမှပဲ ပစ်ထားလိုက်ကြပြီပေါ့။
ဘယ်ခေတ် ဘယ်အခါ တုန်းကမှ မကြားဖူးပါ။
တက္ကသိုလ် ကျောင်းက စာမေးပွဲကို အထက်တန်းကျောင်းမှာ စစ်ဆေးပါတယ်။ စာမေးပွဲခန်းကိုလည်း မည်သည့် တက္ကသိုလ်ဆရာ၊မ မှ လာရောက်ကြီးကြပ်ခြင်း အလျဉ်းမရှိ ။ အဆင်ပြေသလို ပဲ နီးစပ်ရာ အထက်တန်းကျောင်းဆရာမ များက တာဝန်ယူစေပါတယ်။
ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသာများကလည်း .
((ကြာသလားဟော့ မောင်တို့ ရေ )))
အမေ ပြောတဲ့ အမောပြေ ဆိုတာ
စာမေးပွဲခန်းထဲကိုရောက်တော့ ကျွန်တော်က တော်တော် နောက်ကျနေပါပြီ ။ ဘတ်စ် ကား မရလို့ ပါ။
လာရောက်သူ Attendacne လက်မှတ်တွေတောင်ထိုးနေကြပါပြီ ။
ယောက်ျားလေး နဲ့ မိန်းကလေး အတူတွဲပြီးတော့ နှစ်ယောက် တစ်ခုံနှူန်းထိုင်ရပါတယ်။
ကျွန်တော့် ဘေးနားကိုတော့ .အသားညိုညိုနဲ့ ပိန်ပိန်ပါးပါး ကောင်မလေး တစ်ယောက် ။
သူမကပဲ အရင်စ ပြီး ပြုံးပြလိုက်ပါတယ်။ ထိုသို့ ပြုံးလိုက်စဉ် ပါးချိုင့်လေး က အထင်းသား ။ သွားတက်လေးက လည်း အဖွေးသား ။
အမောတကော ပြေးလာရတဲ့ ကျွန်တော့်အဖို့ ကတော့ ရင်ထဲကိုအေးသွားစေပါတယ်။
အမေ ပြောတဲ့ အမောပြေ ဆိုတာ ဒါမျိုးလေးပေါ့ ဗျာ။
အထင်ရှားဆုံးကတော့ ခေါင်းပေါ်မှာ ဆံပင် အရှည် က လက်သန်းလုံး သာသာလေးပဲ ရှိပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ သင်္ကြန်တုန်းက မယ်သီလရှင် ၀တ်ထားတာပဲ ဖြစ်မှာ ပါ။ ဒီက ကောင်ကလည်း ကတုံးဆံပင်ပေါက် ပါပဲ ။ သင်္ကြန်တုန်းက တရားစခန်းဝင် ပဉ္ဗင်းခံ ထားလို့ ပါ။
မယ်သီလရှင် လူထွက်နဲ့ ဘုန်းကြီးလူထွက် တို့ တော့ တွေ့ ကြပါပြီ ခင်ဗျာ ။
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ပီပီ ဒီလိုနေရာမှာ တော့ အာသွက် ၊ လျှာသွက်ရှိရမှာပေါ့။
ကျွန်တော့်နာမည် လပြည့် ပါ ခင်ဗျာ။
ဒီက ညီမ က..
အော်..သမီး နာမည် မိုး ပါ… သူ့ နာမည်က မိုး တဲ့ လား .. ညိုစိမ့်စိမ့်နဲ့လှတော့ လှသလို ပါပဲ ။
ကတုံးနှစ်ယောက် မိတ်ဆက် ဖို့ လုပ်နေတုန်း အခန်းစောင့် ဆရာမ က လာပြီး စာရွက်တွေ ဝေသွားပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးနေ့ ကတော့ မြန်မာစာ ပါ ။
စာမေးပွဲ မေးခွန်းကတော့ ကျွန်တော့် အတွက် သိပ်မခက်လှပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် သူများတွေကတော့ ခေါင်းတပျဉ်းပျဉ်း ကုပ်နေကြပါပြီ။
တအောင့်မျှ ကြာသောအခါ ဘေးနားမှ အနှီမိန်းကလေးက ဟိုကြည့် ဒီ ကြည့် နဲ့ ဘေးဘီဝဲယာ ကို အကဲခတ်နေပါတယ်။
ပြီတော့ ကျွန်တော့်ကို ခပ်တိုးတိုးလေး လှမ်းခေါ်ပါတယ်။
အစ်ကို .. ဟော့.. အစ်ကို..
နံပါတ် ၃…. နံပါတ် ၃ လေ..
ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ့် အာရုံနဲ့ ကိုယ် သူ့ ကို လုံးဝ ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ စာမေးပွဲဆိုတော့ အချိန်ဆိုတာကွက်တိလေ။ အပို အလို မရှိစေရ။
သူမ အသံက နည်းနည်းကျယ်လာပါတယ်။..
ဟော့..အစ်ကို .. သမီးကို နံပါတ် ၃ …… ဘာဂျာ ..ဘာဂျာ…..ပေးပါ..
အလို မြတ်စွာဘုရား . ငါ့လို ဘုန်းကြီးလူထွက် ကို ဘာဂျာ ပေးခိုင်းနေပါလား..
ကတုံးနဲ့ ဘာဂျာ နဲ့လာလားမျှ မအပ်စပ်ပေ။
ကျွန်တော် သည် သူမ ဆိုလို သော ဘာဂျာကို ရုတ်တရက် နားမလည်ပါ။
ထိုစဉ် ရှေ့ ခုံမှ ကောင်လေး တစ်ဦးက စာရွက် ခေါက်လေး တစ်ခု လှမ်းပစ်ပေးလိုက်သည်။ ကျွန်တော် ဖြေကြည့်သောအခါ မိုက်ကရိုဖြင့် ခြုံ့ ထားသော အဖြေများကို ဘာဂျာ ပုံသဏ္ဍန် အတွန့် လေးများ ဖြစ်အောင် ခေါက်ထား ခြင်းဖြစ်သည်။
ပေး..ပေး..အဲဒီ ဘာဂျာ သမီးကို ပေး .. ဟု ဆိုသဖြင့် ကျွန်တော်ကလည်း ဘုမသိ ဘမသိ လှမ်းပစ်ပေးလိုက် ရသည။်
ဒီတော့မှ သဘော ပေါက်တော့သည်။ အော်… သူ ပြောတဲ့ ဘာဂျာ ဆိုတာ ဒါလေးကို..
တော်သေးတာပေါ့.မဟုတ်ရင် . ငါ ထင်တာ မှန်အုံးမယ်. (ကျွန်တော်က .. ပါးစပ်ဖြင့် မှူတ်ရသော လေမှူတ်တူရိယာကို ဆိုလိုပါသည် . အသင်တို့ လည်း မှူတ်ဖူးကြပါမည် )
နောက်ထပ် နာရီဝက်ခန့် အကြာတွင် သူမ ဂဏှာမငြိမ်ဖြစ်လာပြန်၏ ။
ကျွန်တော်လည်း စာမေးပွဲ ဖြေနေရင်း သူမ ဘာလုပ်မလဲ ဆိုတာကိုတော့ စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။
ကျွန်တော် ကြည့်နေရင်း သူမ ဟာ စကတ် ထမီ ကို အသာလေး မလိုက်ပါတယ်။
ပြီးတော့ သူ့ လက်ကလည်း တဖြည်းဖြည်း ခြေသလုံးကို ပွတ်နေသလို ပါပဲ။ ညိုစိမ့် နေသော သလုံးသားလေးများတွင် အကြောစိမ်းလေးများပင် ယှက်သွယ်သည့်အလား။
ခပ်မျဉ်းမျဉ်း ရွှေကြိုးလေးကိုလည်း ခြေဖခုံပေါ်တွင် ခြေချင်း အဖြစ် ၀တ်ထားလိုက်သေးသည်။ ခြေသည်းနီလေးများက ကြွကြွရွရွ
ကျွန်တော်လည်း ဒီ အရွယ် အထိ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ ခြေသလုံးကို အနီးကပ် ထင်ထင်ရှားရှား မမြင်ဖူးလေတော့ ငေးမော ပြီးကြည့်နေမိပါတယ်။
ဒီတော့ ကောင်မလေးက လည်း ရှက်ကိုးရှက်ကန်း နဲ့ ပေါ့ ။
ထို့ နောက် ခြေသလုံး အလယ်နားလောက် အရောက်တွင် အနီရောင် သားရေးပင်နှင့် ပတ်ထားသော စက္ကူအဖြူ ခေါက်သေးသေးလေးတစ်ခု။
နောက်ဆုံး သူ့ မျက်နှာက ၀င်းခနဲ ဖြစ်သွားပါတယ်။ သွားထက်လေးကို ပေါ်အောင် ပြုံးလိုက်ပြီး သူ့ လက်ထဲမှာ စာရွက် အဖြူလေး တစ်ရွက်ကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပါတယ်။
ဒီတော့မှ ကျွန်တော်လည်း သူ့ ဆီက မျက်လုံးကို ခွာပြီး . နာလည် လိုက်ပါတယ်။ အော်…သူ တော့ နောက်ထပ် တစ်ပုဒ် လည်း ကြည့်ကူးတော့မှာပါလား။
စာမေးပွဲ ခန်းကို စောင့်တဲ့ အခန်းစောင့် ဆရာမ များကလည်း ပထမဦးဆုံး ဆယ့်ငါးမိနစ် လောက်မှာ ပဲ ဟန်ရေးပြ လမ်းလျှောက်ကြပါတယ်။
အတန်မျှကြာသောအခါ အခန်းအပြင်ကိုထွက်ပြီး စုပေါင်း စကားတွေ ပြောနေကြပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ ကိုတော့ စာမေးပွဲ ဖြေနေကြတာပါလား လို့ တောင် ထင်ကြရဲ့ လား မသိပါဘူး ။
ကျွန်တော် နားလည် လိုက်ပါပြီ ။
ကိုယ့်တပည့် ကိုယ့်ကျောင်းသားလည်းမဟုတ် ။ အထက်တန်း ပြ ဆရာမ တစ်ဦးနှင့် မည်သို့ မှ မပတ်သက်သော တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ ၏ စာမေးပွဲ ဖြေဆိုနေခြင်းကို တာဝန် အရ သာ လာရောက်ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထို တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ စာခိုး ကြည့် ခြင်း (သို့ ) ပေါ်တင် ကြည့်ကူးခြင်းသည် ၄င်းတို့ နှင့် လုံးဝ မဆိုင်ပေ ။ မည်သို့ မျှ အမုန်းခံ ပြီး တားမြစ်ခြင်းလည်း မပြု ကြပေ။
သို့ သော် ၀တ်ကျေတန်းကြေ တော့ လာရောက်သတိပေးကြပါသည်။
ကဲ ကဲ .. အားလုံး နော်.. မြို့ နယ် ပညာရေးမှူး လာစစ်ဆေးနေတယ်။..လုံလုံခြုံခြုံ လေးတော့ ရှိကြနော်။
ငါတို့ ကို ဒုက္ခရောက်အောင်တော့ မလုပ်နဲ့ နော်။
ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ ဘက် ကလည်း နားလည်မှူ့ ရှိရမှာပေါ့ ဗျာ။
ကျောင်းသားများအားလုံးဟာ ချက်ချင်းဆိုသလို ကိုယ်ရှိန်သတ်ပြီးတော့ . လက်ထဲက စာရွက်အပိုင်းအစ များကို ဟို ထိုးထည့် . ဒီ ထိုးထည့် နဲ့ ပေါ့ ။
ကျွန်တော့် ဘေးက ကောင်မလေးကလည်း မျက်နှာသေ လေး နဲ့ . တကယ့်ကို ဘာမှ မလုပ်တဲ့့ပီဘီ ကလေး တစ်ယောက် အသွင်
ဟန်ဆောင်ထားတဲ့ မျက်လုံးတွေက ကလေး လို လို ပုံဖမ်း ဆိုတာ ဒါမျိုးထင်ပါ့ ။
အဆိုပါ ပညာရေးမှူး ကြီးကလည်း အတန်းထဲကို ၀င်ပြီးတော့ ဟိုကြည့်ဒီကြည့် ။ သူလည်း အထက်က တာဝန်ပေးလို့ သာ လာရတယ်။ သိပ်ပြီးတော့ စိတ်ဝင်စားပုံမပေါ် ။
အော် .. ပညာရေးမှူးကြီးရယ် ။ ဒီလို တွေ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ တကယ်ပဲ မသိတာလား ။ မသိချင်ယောင် ဆောင်သွားတာလား ဆိုတာကတော့ ကာယကံရှင်သာ အသိဆုံး နေမှာပါပဲ ။
စာမေးပွဲ ဖြေလို့ ပြီးခါနီးမှာတော့ အခန်းထဲက အသက်ခပ်ကြီးကြီး ကျောင်းသားတစ်ယောက် လာပြောပါတယ်။
ညီလေး ရေ. ကိုယ်တို့ တွေ စုပေါင်းပြီးတော့ စာမေးပွဲ ခန်းစောင့်တဲ့ ဆရာမ တွေကို . နားလည်မှူ့ ကြေး လေးပေးရအောင် . တစ်ယောက်ကို ငါးရာ ကောက်တယ်ကွာ ။ မင်းလည်း ၅၀၀ ပေး နော် လို့ ဆိုပါတယ်။
နားလည်မှူ့ ကြေး ဆိုတာ ဘာကို နားလည်ပေးရမှာလဲ ။ အော်..သိပြီ .သိပြီ .ဒီလိုလား .. ရပါတယ်ဗျာ ဟုဆိုကာ..အောင့်သက်သက်ဖြင့်ပေးလိုက်ရသည်။
ကျွန်တော် ကတော့သိပ်မပေးချင် ။ ဒီစာတွေကို ထိုက်သင့်သလောက်ကြိုးစား ထားသဖြင့် ဖြေနိုင်ပါသည်။ သို့ သော်… အများ ဆန္ဒ ဆိုတော့လည်း..ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းက အတိုက်အခံ ဂွစာ ကြီးမလုပ်ချင်။
အိတ်ကပ် ထဲက ခြင်္သေ့ တစ်ကောင် ခုန်ထွက်သွားသည်။
ကျွန်တော် သည် သူငယ်တန်းမှ ဆယ်တန်းအထိ ဖြေဖူး ခဲ့သော စာမေးပဲ တို့ တွင် ယခု တက္ကသိုလ် ပထမနှစ် စာမေးပွဲသည် တန်ဖိုးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။
ငါးရာတန် စာမေးပွဲ ပါလား ဟရို့ ။
ဤပို့ စ် ကို www.roadtoarabian.blogspot.com တွင် အပြည့်အစုံ ရှူရန်။
In: ဝတ္ထု Posted By: Zaw Pyae Date: Oct 25, 2010
Leave comment2Comments & 619 views
By: purple at Oct 31, 2010
By: စု at Dec 9, 2010